राप्रपा सांसद लिङदेनलाई धम्काउने व्यक्ति पक्राउ - Awajonline Online Newspaper
राप्रपा सांसद लिङदेनलाई धम्काउने व्यक्ति पक्राउ
राजन शिवाकोटी २६ चैत्र २०७५, मंगलवार
काठमाडौं २०७५ चैत २६
राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनलाई धम्काउदै पैसा माग्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद लिङदेनलाई सुरुमा एक जना अपरिचितले ह्वाट्सएपमा तपाईँलाई मार्न एक जना मान्छे लागेको र उक्त मान्छेबाट तपाईलाई खतरा हुने भएकाले जोगिएर हिंड्न शुभेच्छुकका हैसियतले सूचना दिएको बताएका थिए । सांसद लिङदेनका अनुसार ती शुभेच्छुक भन्नेले अरू पार्टीका मान्छे मिलेर ज्यान लिने योजना बनाएको र कसैलाई पैसा दिएर ज्यान मार्ने जिम्मा दिइएको बताएका थिए ।
यस्तो सूचना पाएको केही दिनमै नयां नम्बरबाट ह्वृाट्सएपमा हिन्दी भाषामा भ्वाईस म्यासेज आएको थियो । ती व्यक्तिले घरबाट बाहिर निस्कन साथ मार्दिने र त्यसका निम्ति ५० लाखमा कुरा भएको बताएका थिए । बारम्बार नयां नम्बरबाट धम्कीयुक्त भ्वाईस म्यासेज आएको र ज्यान लिनका निम्ति सुपारी लिएको बताउनेले पैसाको माग गरिएको सांसद लिङदेनले बताएका थिए । हप्तादिनभन्दा बढी यस्तै म्यासेज आइरहेपछि लिङदेनले यो सूचना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएका थिए ।
यही सूचनाको आधारमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले तिलक पराजुलीलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । लिङदेनसंग पैसा माग्दै उनले धम्काएका थिए ।
उनले अन्य दुई महिलालाई समेत धम्काएको खुलेको छ । उनी मेनपावर एजेन्ट भएको खुलेको छ । १६ लाख रुपैयाँ डुबेपछि उनले पैसा कमाउन विभिन्न व्यक्तिलाई धम्काएको सिआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सोमबार राप्रपा नेपालका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले टिवट्मार्फत चार प्रश्न गरे । उनले लेखेका थिए, के कसैले पचास लाखको लोभमा म माथि गोली चलाउन सक्ला ? के मलाई गोली हान्न पचास लाख खर्च गर्ने कोही होलान् त ? के कसैले गोली ठोक्लाकी भनेर राजेन्द्र लिङ्देन बाटो छोडेर हिँड्छ भनेर कसैले सोचेको होला ? के निर्धािरत मिति भन्दा एकैक्षण पर बांच्ने तागत कसैसँग होला ? के निर्धािरत मिति भन्दा एकैक्षण पर बाँच्ने तागत कसैसँग होला ?
झापा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित संसद्को यस्तो ट्विट त्यति बेला आएको थियो, जतिबेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले झापाका तिलकदास पराजुलीलाई पक्राउ गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकमको नम्बर भएको दुई फरक–फरक नम्बरबाट सांसद लिङदेनलाई ५० लाख नदिए ज्यान लिने धम्की आएको थियो ।
ब्युरोले धम्कीको सूचना पाएलगत्तै हृवाट्स एप चलाउन प्रयोग भएको नम्बर कसको नाममा निकालिएको छ भन्ने सूचना लिएको थियो । त्यसैका आधारमा १२ चैतमा रोकाय पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार पराजुलीले सांसद लिङदेनका अलावा अन्य दुई महिलालाई निजी सम्बन्धका तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्ने भन्दै ब्ल्याकमेल गरेर पैसा असुल्न खोजेका थिए । त्यस्तै पराजुलीले अन्य दुईलाई पनि धम्काएर पैसा असुल्न खोजेको सूचना प्रहरीले पाएको छ ।
प्रहरीले मङ्गलवार नै पराजुलीलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धानका गर्ने भन्दै भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद लिएको छ ।